elderly people – Page2– Healthy Life Journal
All posts tagged "elderly people"
အိမ်ထောင်သည်များ အသက်အရွယ်မရွေး ကျန်းမာနေစေမည့် စမတ်ကျကျနည်းလမ်း ၉ သွယ်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ နှစ်ကာလတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြာခဲ့၊ ကြာခဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အချစ်မပြယ်ဘဲ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာနေစေမယ့် စမတ်ကျကျ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ (၁) ခါးအတိုင်းအတာကို စောင့်ကြည့်ပါ အိမ်ထောင်သည်အများစုဟာ ခါးတုတ်ပြီး ဗိုက်ပူလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
အသက်ကြီးချိန်မှာ ခါးမကုန်းအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်သလဲ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ခါးမကုန်းအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆရာတို့ဆီမှာ အမြဲလိုလို အတွေ့ရများတဲ့ အရိုးပါးရောဂါကြောင့် ခါးကုန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်မှုက အဓိကပါပဲ။ အရိုးပါးရောဂါကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီတွေ...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အိုမင်းခြင်းကို တားဆီးပြီး အသက် ၁၀ဝ အထိ နေနိုင်ဖို့ရာအတွက် ငွေပိုရှိဖို့ လိုသလား၊ အစားအသောက်ကို ပိုစားဖို့လိုသလား၊ အသက် ၁၀ဝ အထိ ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဖို့အတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ လိုအပ်နေသလဲဆိုတာကို...
အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေးအလေ့အထများ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်အနေနဲ့ အသက် ၄၀- ၅၀ အရွယ်တုန်းကလိုပဲ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင် “ဂုဏ်ယူပါတယ်”လို့ အရင်ဆုံးပြောပါရစေ။ ဒါဟာ သင့်အနေနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထတွေကို ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှည်လာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုကျန်းမာပြီး...
ပုသိမ်ဆေးရုံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတက်နေသော (၉၈) နှစ်အရွယ်အဘွား သက်သာ၍ ဆေးရုံဆင်းပြီ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပုသိမ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူများထဲ၌ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ၉၈ နှစ်အရွယ် အဘွားသည် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ဆေးရုံဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပုသိမ် ကုတင် ၅၀ဝ ဆံ့ တိုင်းဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်က...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ရန်ကုန်မြို ့၊ လှိုင်မြို ့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အဘွားဒေါ်ခင်မေချောသည် ယခု အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ်အထိ ကြီးကြီးမားမား ဆေးကုသစရာမလိုဘဲ ကျန်းမာသက်ရှည်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “အဘွားက ၁၂၈၈ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်...
အသက်ကြီးသူများ လျစ်လျူရှုမထားသင့်သည့် လက္ခဏာရပ်များ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ ထုံးစံမဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားလာရရင် ပြင်းထန်ဆိုးဝါးတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကြောင့် လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်တဲ့အတွက် လျစ်လျူရှုမထားသင့်ဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော...
အသက်ရာကျော်ရှည်သူတို့ နေထိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံက ‘ဘာပန်ရွာလေးအကြောင်း’
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဘာပန်ရွာလေးကို အသက်ရှည်တဲ့ရွာလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီး အများစုက အသက် ၁၀ဝ ကျော်အရွယ်အထိ အသက်ရှည်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အသက်ရာကျော်ရှည်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေထံ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန် ဂျွန်ဒေးက သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ နေထိုင်နည်းနဲ့ အသက်ကြီးတဲ့အထိ...